Nzira yekukunda sei rudo rusina kukodzera ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro ekukurira rudo rwusina kukumbirwa. Kana uine rudo rusina kukodzera, unogona nyaradzwa uye netariro muna Jesu. Mwari vane zvavakakurongera. Pamwe munhu iyeye waune hanya naye haasiye chikamu chehurongwa, asi iwo haaziye magumo.
Kune mhando dzinoverengeka dzerudo rusinga tsanangurike: pakati pevabereki nevana, hama, varume nemadzimai, uye zvakare rudo rwepabonde. Mwari vanonzwisisa kurwadziwa kwerudo rusina kukodzera. Anoda munhu wega wega ne infinito rudo, asi vanhu vazhinji vanoramba rudo rwavo. Muzvikamu zvakasiyana zveBhaibheri, Mwari anofananidzwa nemurume anorambwa nemukadzi wake, kunyangwe amupa rudo rwake rwese. Zvakadaro, Mwari haasiye kana kutipa rudo Rwake.
Muchikamu chino, isu tichaenda kutaura nezve iyo rudo rusina kukodzera pakati pevanhu vasina kuroora. Zvakajairika kudanana nemunhu asinganzwe zvakafanana nezvako. Rudo haruwirirane, saka haugone kuve nehukama.
1 Maitiro Ekuita Kupfuura Isingadzokwi Rudo: Matipi
1.1 1. Gara kure kwechinguva
1.2 2. Wana simba muhukama hwako naMwari
1.3 3. Chenjera nesarudzo hombe izvozvi
2 Ko kana mumwe munhu achikuda, asi iwe usinganzwe zvakafanana?
Maitiro Ekuita Kupfuura Isingadzokwi Rudo: Matipi
Paunoona kuti rudo rwako harwutsigirwe, danho rekutanga ndere gamuchira icho chokwadi. Iwe haugone kuita kuti chero munhu akude iwe. Kunyange Mwari haadaro! Unogona chete kupa rudo rwako uye kumirira kuti mumwe munhu apindure. Kana zvisiri, unofanira remekedza sarudzo yemunhu iyeye.
Usaedze kukwidza tariro yako kumusoro. Hazvireve kuti kwete. Kana munhu waunofarira akakujekesa kuti havadi kuve muhukama newe, rega kumutandanisa. Izvi zvinongokukuvadza iwe. Hukama hunoshanda chete kana imi vaviri muri pamwe chete. Unofanira kutanga kuenderera mberi nehupenyu hwako. Uye danho rekutanga kugamuchira.
Ko vaviri vangafamba pamwechete vasina kusangana here?
Amosi 3: 3
1. Gara kure kwechinguva
Gara kure kwechinguva
Bhaibheri rinodaro rudo rune moyo murefu, rune moyo munyoro uye harutsvaki zvarwo. Kana rudo rwako rusingadzokororwe, chinhu chakanakisa chaungaitira munhu iyeye kuremekedza sarudzo yavo uye kudzivirira kunyadziswa. Usave noudyire, chengeta chinhambwe.
Rudo rune moyo murefu, rune moyo murefu; rudo haruna godo, rudo haruzvikudzi; haruna manyawi;
haaiti chero chinhu chisina kukodzera, haatsvaki zvake, haatsamwi, haana chigumbu.
1 VaKorinde 13: 4-5
Kuona kuti rudo rwako rwusingadzokororwa zvinorwadza, saka, moyo wako unoda nguva kuti upore. Kuswedera padyo padyo nechinangwa cherudo rwako zvinongoita kuti nzira yacho iome. Iwe haufanire kucheka hukama hwese, asi dzivisa kuswedera padyo nemunhu uyu. kunyanya pakutanga.
2. Wana simba muhukama hwako naMwari
Wana simba muhukama hwako naMwari
Unogona kunge uri kunyanya kuda uye kuti hapana mumwe munhu achazadzisa hupenyu hwako. Nekudaro, hukama hwakanyanya kukosha hwauinahwo ndiJesu. Inguva dzakadai dzinoda Jesu zvakanyanya, kukunyaradza uye kupa hupenyu hwako chinangwa.
Muna Jesu, rudo rwako rwunopfuura kudzorerwa! Iye ndiye asingambokusiyei. Panguva dzose, Jesu anogara aripo uye ane simba rekukubatsira kukunda marwadzo erudo rusingakundwe.
Mwari anoziva zvakakunakira. Kana rudo rwako rusingabvumirwe, saka Mwari ane mamwe marongero ehupenyu hwako.. Nyengeterera kuti kuda kwaMwari kuitwe muhupenyu hwako, kuzviisa pasi pekuda kwake.
Vakaropafadzwa vanoyananisa, nekuti vachanzi vana vaMwari.
Vakakomborerwa avo vanotambudzwa nekuda kwa Kururamisira, Nekuti ushe hwekumatenga ndehwavo.
3. Chenjera nesarudzo hombe izvozvi
Ive nekuchenjerera nesarudzo hombe izvozvi
Paunotambura nemhinganidzo huru, sekuona kuti rudo rwako haruna kudzorerwa, muyedzo ungamuka wekuita chimwe chinhu choupenzi. Zvimwe zvinhu izvo HERE Zvinhu zvekuita kubata nekurwadziwa kwemoyo wakaputsika ndezvi:
Zvipire kuna tevera rudo rwako isingadzokwi.
Zvipire kuna shandura rudo rwako ruve ruvengo.
Kutsvaga kunyaradzwa nedoro kana zvinodhaka.
Kufambidzana kana kuroora mumwe munhu munguva pfupi, Kuti usave wega.
Kusiya zvese muhupenyu.
Siya zvese kuchinja zvakanyanya hupenyu hwako
Mukurwadziwa kweshungu, pfungwa dzako hadzisi kushanda zvakanaka. Naizvozvo, kuita sarudzo dzakanyanya haisi zano rakanaka izvo zvinokanganisa hupenyu hwako hwese panguva iyoyo. Mira kusvikira wanyarara. Nezvisarudzo zvakakura, usamhanye.
Mifungo yeanoshingaira zvirokwazvo inowanzo kuva nekuwanda;
Asi munhu wese anomhanyisa zvakapenga, zvirokwazvo anoenda kuhurombo.
Zvirevo 21: 5
Ko kana mumwe munhu achikuda, asi iwe usinganzwe zvakafanana?
Haufanire kunzwa zvakafanana kune mumwe munhu. Zviri nani kuva akatendeseka pane kuyedza kumanikidza iwe kuti unzwe zvakafanana. Hukama husina kutendeka hwakafa usati hwatanga. Kana iwe uchinzwa sekuti uhwu hukama hwausingade kuva nahwo, ita kuti manzwiro ako abudirire kune mumwe munhu. Uku ndiko kusarudza kwako uye hapana munhu ane mvumo yekumanikidza kuti udanane nemunhu wausingade.
Isu tinovimba ichi chinyorwa chinokubatsira iwe kuti unzwisise maitiro ekukunda pasingadiwi rudo. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuziva hukama hwechisimba uye maitiro ekuita zvinoenderana neBhaibheri, ramba uchivhura Ziva.online.
Nzira yekuziva sei hukama hwechisimba?